Coronavirus covid-19 lockdown update: သင်နိုးလာတယ်၊ ပိတ်မိနေပြီဆိုတာသိတဲ့အခါဘာလုပ်နိုင်လဲ။ : Martin Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 24 2020 အပေါ်	• 16 မှတ်ချက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကိုစတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာခက်ခဲတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်မယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ coronavirus covid-2020 ပိတ်ဆို့မှုအပြည့်အစုံသို့နောက်ဆုံးအလှည့်အပြောင်းကိုကြည့်ခြင်းကမကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အချို့ပေးသည်။ နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့မှာငါဒီလိုရေးခဲ့တယ် -“ ငါပြောချင်တာက ၂၀၂၀ ဟာ rapids နှစ်နဲ့ hypersonic အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါတို့သမိုင်းမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့အပြောင်းအလဲများ ဤလောက၏အုပ်စိုးရှင်များအတွက်အချိန်ကုန်ပြီ။ သူတို့မှာမှားယွင်းတဲ့အနည်းကိန်းအထိ ၂၅ နှစ်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ ”
၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲမှာကူးစက်ရောဂါမရှိသေးဘူး၊ ငါတို့ဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြည့်စုံတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသက်သေပြနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ လောက်မှာသိမ်းဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်နယ်သာလန်၌အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုတောင်မှရှိပုံမပေါ်မီရက်သတ္တပတ်များစွာကပင်ဖြစ်သည်။ မီဒီယာ (ပုံရသည်) ၏ပုံကြမ်းသောပုံရိပ် IMBers အိမ်သာသုံးစက္ကူများသိမ်းဆည်းထားသူများသည်ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူသင့်သည့်အရာ - အသက်ရှည်သောအစားအစာ၊ စည်သွတ်အစားအစာ၊ ရေစသည်ဖြင့် - ၀ ယ်သင့်သည်ကိုအာရုံလွှဲရန်ပါးနပ်သောမီဒီယာပရိုဂရမ်းမင်းလှည့်ကွက်ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်စာဖတ်သူများသည်ထိတ်လန့်မှုမဖြစ်ပွားမီအချိန်များစွာ၌ရှိခဲ့သည်။
များစွာသောပိုမိုမှန်ကန်သောဟောကိန်းများသည်မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းနှင့်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိလိုက်နာသွားမည်ကိုငါမြင်ခဲ့သည် ဒါကြောင့်“ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ” လို့မကြာခဏမေးလေ့ရှိပါတယ်၊
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ယခုတွင်ဗီဒီယိုများကိုတွေ့ရသည် Janet Ossebaard ပတ်ပတ်လည်သွား သူမသည် Donald Trump အားလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သရုပ်ဖော်ခဲ့ပြီးကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းတို့အားဖြစ်ပျက်သမျှကိုလက်အောက်ခံရန်တောင်းဆိုကြသည်။ သူမရဲ့ဗီဒီယိုတွေကလူတွေကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ဒီနေရာမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတိုက်အခံနှစ်ခုရဲ့အခန်းကဏ္clearlyကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်။ Janet Ossebaard သည်လူများကို Q-Anon လုံခြုံမှုကွန်ယက်သို့မောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ သူမလည်း Donald Trump အလုပ်များကြောင်း '' ဖော်ပြထားအဆိုပါ cabalနှင့် coronavirus ဒီထဲမှာအခန်းကဏ္ plays မှပါ။
လူတွေနားမလည်တာကဒီလိုနှစ်ဆဆော့ကစားရန်အတွက်မီဒီယာများစွာကိုဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဂြိုလ်သားများကိုကယ်တင်ရန် (ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် Trump နှင့်အတူ) ကယ်တင်ရန်မျှော်လင့်သည်။ သူတို့ကိုငါအိပ်မက်ထဲမှကူညီရန် အဆိုပါ cabal လဲကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
သူမ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူများသည် passive mode တွင်ရှိနေသည်။ ငါဆိုသည်ကား၊
ကင်မရာနောက်ကွယ်မှာထိုင်ပြီးသင့်ကိုသူတို့စီစဉ်ပေးနေသလိုခံစားမိစေတဲ့သူတွေကသင့်ကို passive mode ထဲကိုတွန်းပို့တယ်။ ဒါဟာ Q-Anon စည်းစိမ်ကို 1% ကနေယူလိုသူ Trump န်းကျင်ကလူများ၏လျှို့ဝှက်ကလပ်ကြောင်းထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုကယ်တင်ရန်လာကြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ။ စိတ်ပျက်စရာ။ ၎င်းသည်မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
Trump ဟာ cabal ဖြစ်ပါတယ်။ Trump နည်းတူခက်ခဲ lockdown အစီအမံအကောင်အထည်ဖော်။ Defender 2020 စစ်သားထောင်သောင်းချီသောဥရောပစစ်သည်များသည်ဥရောပ၌ 'cabal' ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟူသောပုံဖော်ထားသည့်ပုံရိပ်သည်မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
Janet Ossebaard ကအထက်တန်းလွှာကိုစစ်သားတွေသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းကိုအေးဆေးနေဖို့ပြောလိုက်တယ်။ ပုံရလား
Janet Ossebaard ကလည်းဘဏ္financialာရေးပြန်လည်စတင်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအခါချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ၁% နှင့်အတူရှိသည့်ကြွယ်ဝမှုသည်ပြည်သူလူထုသို့ပြန်လည်စီးဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ "ကယ်တင်ရှင် Trump ကြီးကမင်းအတွက်လည်းစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ " မဟုတ်ပါ။ သူ (ဥရောပခေါင်းဆောင်များကဲ့သို့) သူလုပ်ပေးမည့်အရာသည်သင့်အားအခြေခံ ၀ င်ငွေကိုပေးလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးများ၊ ဘဏ်များနှင့်ပင်စင်ရန်ပုံငွေများကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းလိမ့်မည်။ အဲဒါဘာကိုခေါ်သလဲသိလား ကွန်မြူနစ်ဝါဒ.
ကျနော်တို့ကွန်မြူနစ်စနစ်ဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားနေကြသည်။ အမြန်ရထားမှာ ငါအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည် ဤဆောင်းပါးတွင်.
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကြေးပြန်လည်စတင်မှုကိုအမှန်တကယ်တွေ့မြင်နေရသော်လည်း Q-Anon နှင့် Janet Ossebaard မှလွဲ၍ အခြားမျိုးစိတ်များကသင့်အားပြောပြနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ site ပေါ်တွင်ဤကဲ့သို့သောပြန်လည်စတင်မှုပြုလုပ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့သည် (ကြည့်ပါ ဒီမှာ) ။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်ယခုအခါကောင်းမွန်သော alibi ဖြစ်သည်။ လူအုပ်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ကစားနိုင်သည်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်၊ သို့သော် Janet Ossebaard ဇာတ်လမ်းသည်တမင်အတုသတင်းထောင်ချောက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် ကရှင်းပြခဲ့သည်)
Janet Ossebaard နှင့်အခြားသူများယခုအလွန်ဂုဏ်တင်နေကြသောကွန်မြူနစ်စနစ်သည်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုနေစဉ်အမှန်တကယ်အားနည်းချက်ရှိသည်။ အဲဒါတစ်ခုပါလိမ့်မယ် အာဏာရှင်ဝါဒပညာရှင်ကွန်မြူနစ် စစ်အစိုးရဖြစ်
လယ်ကွင်းမှထွက်ခွာမည့်နိုင်ငံရေးသမားအနည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစပျိုးခဲ့သော pawn များကိုအစားထိုးလက်များဖြင့်အစားထိုးရန်အသုံးဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သောထင်ရှားသောစီအီးအိုများရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုက်ပြီဟူသောအခြားမီဒီယာတွင်ဖော်ပြချက်နှင့်ထင်မြင်ချက်ကိုမလှည့်စားပါနှင့်။ ၎င်းသည် Q-Anon လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
နည်းပညာအရကွန်မြူနစ်စနစ်ဆိုသည်မှာသင့်အားအခြေခံ ၀ င်ငွေ (၀ င်ငွေ၊ အိမ်ရာစသည်တို့) ရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းသင့်အားနည်းပညာဖြင့်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်ပြုလုပ်သည့်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုကြီးမားသောအချက်အလက်စနစ်များကစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုသည်နည်းပညာအရနည်းလမ်းများကိုလျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်သေချာစေသည်။ မင်းစဉ်းစားသင့်တယ် indelible ဒစ်ဂျစ်တယ် ID ကိုဥပမာအားဖြင့်သင်၌ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အနာပျောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ဆေးဝါးနှင့်ကာကွယ်ဆေးကိုသင်သောက်ခဲ့ပြီးပြီနှင့်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိမ်တိုက်မှအစစ်အမှန်အချိန်တွင်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် 5G အင်တာနက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်နိုးနိုးကြားကြားနှင့်အခြားမီဒီယာများကသင့်အားလိမ်လည်မှုနှင့်ရောနှောနေသောအမှန်တရားဝက်များနှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုမှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်လက်ခံရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ဖုံးကွယ်သောအန္တရာယ်။ သူတို့ကမင်းတို့ကိုအတွင်းထဲထိုင်စေချင်တယ်၊ ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကိုသူတို့လုပ်ခိုင်းတာကိုလုပ်စေချင်တယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတို့ cabal clean up လုပ်ဖို့လာကြ၏။ မဟုတ်ပါ၊ အများဆုံးသတင်းမီဒီယာများကဟားဂ်သို့မဟုတ်ဘရပ်ဆဲလ်တွင်အပေါင်ပြောင်းမှုကိုတင်ပြလိမ့်မည်။ အများဆုံးမှာသူတို့သည်သင့်အားအမှန်တကယ်ထိတ်လန့်မှုကိုမပြပါ။ ဒီစစ်တုရင်ကစားပွဲဟာသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတယ်၊
အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်နိုးချင်လျှင် Q-Anon နှင့် Donald Trump ပုံပြင်များကဲ့သို့မှားယွင်းသောထင်ယောင်ထင်မှားများကိုဖြတ်သန်းရမည်။ အကယ်၍ မင်းတကယ်နိုးထချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီအာဏာရှင်စနစ်ကမပျောက်ကွယ်တော့ဘူး။ ဘယ်တော့မှမ သင်ခံစားခွင့်ပေးထားသောလွတ်လပ်ခွင့်များသည်အမှတ်အသားကိုရရှိမှသာပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြုချက်ကိုသတိရသလား။ ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်နှင့်တူသည်။
ထိုတံဆိပ်လက်မှတ်တည်းဟူသောသားရဲ၏နာမဖြစ်စေ၊ နာမ၏နံပါတ်မှတပါးအဘယ်သူမျှဝယ်။ မဝယ်နိုင်။ ” (ဗျာဒိတ် ၁၃း၁၆-၁၇)
ကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်ကုန်ဆုံးသောကာလ၌ရှိကြောင်းကိုရှင်းပြသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဘာသာရေးကိုလျစ်လျူရှုလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာသာရေးကိုင်းဘာသာမလိုက်နာသော်လည်းကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသည်ဘာသာရေးအစီအစဉ်များကိုလိုက်နာသည်ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ Trump သည်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုofသရေလနိုင်ငံ၏မြို့တော်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီးအကြောင်းမှာသူတို့ကရှောလမုန်၏ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဘာမျှမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်တွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသည် 'မာစတာဇာတ်ညွှန်း' ကိုမည်သို့လိုက်နာကြောင်းရှင်းပြသည်။ ထို master script သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့အလွန်ရှင်းလင်းစွာနှင့်လျင်မြန်စွာတွေ့မြင်နေရသည်။
ငါတို့အားလုံးကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုမကြာခင်မှာပဲငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။ ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသံသယရှိကြသည်။ လူတွေကကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေရမယ်၊ လူအများကသူတို့၏ပြတင်းပေါက်နောက်ကွယ်မှသို့မဟုတ်လသာဆောင်မှလူများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သူတို့ဟာကူးစက်ခံရတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ် "ညွှန်ကြားချက်တွေကိုနားမထောင်ခဲ့လို့" ။ လူတိုင်းမိမိအိမ်၌ရှိသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမကူညီနိုင်။
သင်သပ်ရပ်စွာလက်တွေ့ကျပြီးလိုအပ်သောခွဲစိတ်ကုသမှုကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံနေရပြီဟုမီဒီယာကဆက်ပြောသည်။ မည်သူမည်မျှသည် gulags သို့ပျောက်ကွယ်သွားမည်ကိုမည်သူမျှမသိနိုင်ပါ။ Janet Ossebaard ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စိတ်ချလက်ချ "Trump အဆိုပါ cabal တက်သန့်ရှင်းရေးကြောင်း" ။
ငါတို့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းများကြောင့်လမ်းပေါ်ထွက်နေသောလူများကို“ အမိန့်ပေးမှုကိုနားမထောင်ကြ” သောသူများနှင့်တွေ့ဆုံမှုများပြုလုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ Defender 2020 သည်၎င်းအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည် (“ cabal” ကိုမသန့်ရှင်းစေရန်) ။
မီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးနောက်ဆုံးတွင်ဖော်ပြမည့်မျှော်လင့်ချက်သည်ပထမ ဦး ဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းသည့်မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးရှိပြီးနောက်တွင်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကမ်းလှမ်းလာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သူသို့မဟုတ်သူမမည်သည့်နေရာတွင်ရှိကြောင်းနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမမည်သည့်ဆေးဝါးကိုလက်ခံရရှိသည်၊ ၎င်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအပါအ ၀ င်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် (အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) ၏နိဒါန်းနှင့်ပေါင်းစပ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည် ကျန်းမာရေး (နှင့် CRISPR-CAS12 အပါအဝင်) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖတ်ပါ).
ပြီးရင်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ် ဇုန်မှဇုန်သို့၎င်း၊ ပွင့်လင်းသောနယ်နမိတ်အားလုံးနှင့်မရှိတော့ပါ၊ သို့သော်ဇုန်နယ်နိမိတ်ပို့စ်များကိုဒီဂျစ်တယ်နှင့်အရေအတွက်အရအလွန်များပြားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောဇုန်များသို့ ၀ င်ခွင့်ပြုထားသည့်သူများနှင့် ၀ င်ခွင့်မပြုသည့်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဏာရှင်ဆန်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ“ ကယ်တင်ခြင်းနိုင်ငံတော်” ဆီသို့ ဦး တည်နေသည်။
သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ သွားနှင့်လက်သည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ခုခံသင့်သလား။ ဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်သင့်တဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ဒါကလွတ်လပ်မှုဖြစ်တယ်။ ယခုဤအချိန်သည်ရှေးအချိန်ကတည်းကပင်ချိုးဖောက်ခံလိုက်ရပြီ ဖြစ်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုသင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မတားဆီးနိုင်ပါ။ အမှန်မှာ၊ မည်သည့်ခုခံမှုမျိုးကိုမဆိုရက်စက်စွာဖိနှိပ်လိမ့်မည်။ သင်သည်လူမှုမီဒီယာသို့မဟုတ်သင့် S ည့်ခန်း (Siri နားထောင်နေသည့်နေရာ) တွင်သင်ကပြောင်လှောင်မှုများအားလုံးကိုတွေ့ပြီဟုပြောရင်တောင်အာဏာရှင်နိုင်ငံတွင်သင်ရှိနေနိုင်သည်။
ခြိမ်းခြောက်သောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သူမည်သူကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသောသူများသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်အခြားသူများအားအကြံပြုခြင်းမရှိသောသူများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ဤအရာအားလုံးသည် "coronavirus ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း" ၏အသွင်အပြင်အောက်တွင်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။
ငါတကယ်လုပ်နိုင်တာအတွက်လက်တွေ့ကျအကြံဥာဏ်တွေတကယ်မရှိဘူးလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော်၎င်းသည်သတိနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မီဒီယာနှင့်အခြားမီဒီယာများကသင့်အားရပ်တန့်စေသော passive သဘောထားထက်လုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်အမှန်တကယ်နေသောသူကိုအသက်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖန်တီးမှုစွမ်းအားနယ်ပယ်နှင့်သင်၏မူရင်းကိုသက်ဝင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါက floaty အသံ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါရိုးရှင်းစွာငါကတိပေးသည်, သင်ကရှင်းပြပါ။
မာစတာဇာတ်ညွှန်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မှန်ကန်သောဟောကိန်းများကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ဦး တည်သည့်အရေးပါသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းနေပါသည်။ ငါမကြာခဏ 1 ဆောင်းပါးသည်ဤအဘို့အတိုလွန်းကြောင်းပြောပြီ။ ဒါကြောင့်ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာစာအုပ်ပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးဖတ်သင့်တယ်။ အခုတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့သင်ဒီစာအုပ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိထပ်ဖြည့်စာအုပ်များကိုဖတ်နိုင်သည်။
ငါတို့ဟာအလွန်အင်အားကြီးတဲ့သတ္တဝါတွေပါ၊ ဒါက passive mode ကနေထွက်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ သင်နားလည်တာထက်အများကြီးပိုကြီးတယ်။ ထွက်ရှာရန်အချိန်။
မွေးဖွားခဲ့ပြီး link ကို entries တွေကို: valcabal.nl
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်သတင်းအတုအတုဖြစ်သည်။
ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် 'ကွမ်တန်အစက်များ' သည်သင်၏ Coronavirus ရှိမရှိနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခံခြင်းရှိမရှိကိုခြေရာခံသည့်ကြိုးမဲ့ ID ကတ်ပြား '
Tags:: Anon, cabal, coronavirus, Covid-19, Donald, IMBers, Janet, ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုပြီးမှသာ, နွားမုတ်ဆိတ်မွေး, ကူးစက်ရောဂါ, Q, ကို Trump, ရုတျတရကျဖွစျပှါးခွငျး
Alie Muana wrote:
24 မှမတ်လ 2020 12: 59
24 မှမတ်လ 2020 13: 18
ငါဘာမျှမလုပ်ဘဲ ၇ နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်ငါ့စာအုပ်ကိုပုံနှိပ်ဖို့ပရင်တာကိုငါမတောင်းနိုင်ဘူး။
ထိုစာအုပ်သည်ထို ၇ နှစ်လုံးလုံးအကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြထားသည် အခမဲ့ဖတ်လို့ရအောင် site ပေါ်တွင်ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါသင်ရုံရှာဖွေရန်နှင့်ဆောင်းပါးကနေဆောင်းပါးဖို့ကိုနှိပ်ပါ။ သို့သော်စာအုပ်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအကျဉ်းချုပ်ပေးသည်ထို့ကြောင့်လုပ်။ , များစွာသောစာဖတ်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမှာ။
သင်၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှု ၏သင်တန်းကမလိုအပ်ပါဘူး။ ခွင့်ပြုထားသည်
24 မှမတ်လ 2020 22: 20
ငါသည်သင်တို့၏စာအုပ်ဝယ်ယူ! ငါ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလာအောင်နှိုးဆွပါစေ။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ် ၀ င် စား၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာသင်ဖြစ်သည်။
သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာငါတို့ကိုချုပ်နှောင်ထားမှာလဲ အလွန်ရှည်လျားသောညာဘက်ယူမရနိုင်သည်သောကလေးများစသည်တို့နှင့်ဆိုလိုပါသလား အပြင်နှင့်သင်၌ရှိသည်သောအားလုံးအသိပညာမှ! သူတို့သည်သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမည်သို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုသင်မကြောက်ပါက (တစ်ခါတစ်ရံတွင်မည်သည့်နေရာတွင်တွေးနေသည်) ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက်ပေါ်တွင်အရာအားလုံးကိုဖတ်နိုင်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ထိုစာအုပ်ကိုမည်သူဝယ်သည်ကိုမြင်နိုင်သလောက်ရနိုင်မည်လား။ သူတို့သည်သင့်ကိုခေါ်ဆောင်လာရန်ထိုအရာအပေါ်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ ငါစာအုပ်၏ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ ချစ်ပြီးဂရုစိုက်ပါ။
ယခုအချိန်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်သောမိခင်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ တန်ခိုးကြီးပြီးပိုသိသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုနေဆဲမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်
24 မှမတ်လ 2020 14: 06
24 မှမတ်လ 2020 14: 08
၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အမည်များကိုထုတ်ဝေခြင်းမရှိ (trolls, profiles အတုများ၊ bot များ ... သို့သော်အထူးသဖြင့်ယခုသင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိသည်) IMBs တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ပြည်နယ်အတွေးအခေါ်များ၏အခြေခံအပေါ်တွင်သာတည်ရှိရန်အရေးကြီးသည့်အခါမည်သူတုံ့ပြန်သည်။
24 မှမတ်လ 2020 13: 16
24 မှမတ်လ 2020 19: 01
Greta Thunberg သည်အခြားကလေးများနှင့်အတူကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်
ပုံသည်မီတာဝက်အကွာအဝေးနှင့်လုံးဝမဝေးပါ။ ðŸ˜ ‰
သို့မဟုတ်သူသည်နွေ ဦး ပေါက်ရာသီတွင်နယ်သာလန်၌အိပ်မောကျစွာလမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီးနွေ ဦး တွင် -6 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်အအေးမိခဲ့သလား။
24 မှမတ်လ 2020 19: 45
24 မှမတ်လ 2020 20: 17
ဟုတ်ကဲ့၊ (သူတို့လိုချင်တာမဟုတ်ရင်) သနားစရာကောင်းလာတယ်။
24 မှမတ်လ 2020 20: 16
သင်ယုန်တွင်းထဲသို့နက်ရှိုင်းလေနက်ရှိုင်းမှုနှင့်မှန်ကန်သောအရင်းအမြစ်များကိုသင်ရှာဖွေသောအခါ (ဤ site သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်) ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည်။ ) ။
မင်းရဲ့ပင်ကိုယ်သိစိတ်ဟာအမြဲတမ်းပိုကောင်းလာတယ်။ (ငါသည်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Baudet နှင့်ဥပမာ nigel farage သည်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုထင်ခဲ့သည်) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% အပြည့်အဝယုံကြည်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံရေးသမားအားလုံး၏ ၁၀၀% သည်အထက်တန်းလွှာများမှအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ (စစ်ဆေးပြီးကြောင်းမတစ်ခုရှိပါတယ်) ။
25 မှမတ်လ 2020 05: 25
စွန် နောက်ဆုံးအခြေခံဝင်ငွေ (nohee၊ Mr Vrijland ၏ဆောင်းပါး ၂၀၁၁ ကိုဖတ်ပါ။ )
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောငွေများ (သာမန်သံသယရှိသူများ) ၌များများရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့မှာအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သုညနှင့်သူများသာကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမီသောအရာများဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ဟာပိုက်ဆံနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်။ မာတင်ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမြှုပ်နှံပြီးပြီ။ စောစောပိုင်းကခွေးတစ်ကောင်ဟာရံဖန်ရံခါတစ်ဖုံဖောင်းကျတတ်တယ်။
25 မှမတ်လ 2020 10: 23
ဒါကြောင့်အမေရိကမှာသူတို့ဟာအခြေခံဝင်ငွေ (မိသားစုတစ်စုလျှင် ၃၀၀၀ USD) နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ကြတယ်။ ဤအချက်သည် US တွင်ယာယီအခြေခံ ၀ င်ငွေ (ယာယီအမြဲတမ်းအတွက် newspeak ဖြစ်သည်) ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
ဒီအခြေခံ ၀ င်ငွေကိုအနည်းဆုံးငါကြားသိခဲ့ရသော virtual ငွေကြေး (FED bitcoin အမျိုးအစား) တစ်ခုတွင်သာပေးချေလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ ဒါကြောင့်လူ ဦး ရေတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာ့အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးအသစ်နဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပါ။
US နှင့် Asia ရှိလူများ (သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း) သည်ယခုအခါ 5G ကိုမြန်ဆန်စွာမြန်ဆန်စွာမောင်းနှင်နိုင်ပြီဖြစ်သည် (pushback မပါဘဲလူ ဦး ရေသည်ယခုအခါအခြားအရာများလုပ်ဆောင်နေသည်) ။ ငါသည်လည်းဤကမ္ဘာတစ်ခွင်၌ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်တယ်
နိုင်ငံတော်တော်များများသည် 3G ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သောအာဖရိက၌၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
6G နည်းပညာအကြောင်းပြောစရာတောင်မရှိပါဘူး၊ ဘယ်လိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းစေမလဲ။ နည်းပညာသစ်သည်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောကြောင့်ယခင်ကပင်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းအရာရာအမီလိုက်သည်။
25 မှမတ်လ 2020 10: 52
Elon Musk တွင်လှပသောဒုံးကျည်များတပ်ဆင်ထားပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် 5G ဂြိုဟ်တုများကိုလွှတ်တင်ရန်ပြောထားသည်။
26 မှမတ်လ 2020 06: 54
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ယူကေတွင်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ (HCID) ဟုမယူဆတော့ပါ။
.. Madurodam မှလွဲ။
26 မှမတ်လ 2020 07: 10
Trump, Bolsonaro နှင့် Johnson တို့သည်တူညီသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်
ဆောင်းပါးများစွာမှာကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်း Robert Jensen, Alex Jones နဲ့လက်ျာလက်ယာအစွန်းရောက်တွေလိုလုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်မီဒီယာနှင့်အဓိကနိုင်ငံရေးကိုဝေဖန်သောနောက်လိုက်အမြောက်အများကိုရရှိရမည်။ သူတို့က၎င်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အတွေးအခေါ်တစ်ခုအားထိုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချိတ်ဆက်ရန်ကူညီရမည် သူတို့ကထိုတံဆိပ်ကို Trump စခန်း (Trump, Bolsonaro, Johnson) နှင့်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းချိတ်ဆက်ရမည်။
ထိုအခါ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်း profiled) အမှတ်တံဆိပ်စုပေါင်းတက်မှုတ်လိမ့်မည်။ ယခုရွေးချယ်လိုက်သောလမ်းသည်“ သူတို့ coronavirus ကူးစက်ရောဂါနှင့်အတူမဆိုးဟုဟန်ဆောင်ကြသည်” ထို့ကြောင့်ညာဘက်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် 'coronavirus အကျပ်အတည်းကိုငြင်းပယ်သူများ' နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ထိုအခါကိစ္စကိုလုံးဝပိတ်ထားသည်။ ထိုအခါ Trump နှင့် Bolsonaro နှင့်ဂျွန်ဆင် (Brexit ၏အဆုံး) လယ်ပြင်မှထွက်ခွာရန်ရှိသည်နှင့်လက်ဝဲ - တောင်ဟောင်းနိုင်ငံရေး cabal နောက်တဖန်ကျော်ယူနှင့်ဝေဖန်သူများထောင်ထဲမှာသို့သွား။ , ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာကိုဘယ်သူမှသံသယမဝင်သင့်ဘူး။
ရလဒ် - အတွေးရဲများအပါအ ၀ င်၊
လုဒိ Roosje wrote:
29 မှမတ်လ 2020 13: 34
သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာတင်တာ။ မင်းစာအုပ်ကို PDF အဖြစ်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့စုစုပေါင်းသော့ခတ်မှုရောက်လာမလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သိပ်မဝေးသေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ“ စမတ်” ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေဟာ“ အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သော့ခတ်ပိတ်ဆို့မှု” ကိုကိုင်တွယ်နိုင်တယ်။ ငါပြောတာကတစ်ခါမှမစွန့်ခွာဘူးလို့ငါပြောတာမို့လူတွေကိုအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုဆန့်ကျင်မှုလို့သင်သတ်မှတ်လိုက်တာကမတရားဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါအခုငါထင်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးမှန်နေပြီဆိုတာငါသိပြီ။ Charlie H ကတည်းကကျွန်တော် rabbithole တိုင်းထဲကို ၀ င်လိုက်တယ်။ အဲဒါဟာ pedophile sodomy ရဲ့ဥပစာစကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုငါသိသောကြောင့်ငါမသုံးချင်တော့သည့်အသုံးအနှုန်းနှင့်အမှန်တကယ်မှာအဆုံးသတ်အရာများစွာသည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ wacky သိုးလိုကမ္ဘာပေါ်ရှိလူ ဦး ရေအားလုံးဟာ lockdown နှင့်လူမှုရေးအရဝေးကွာသွားခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအားဖြင့်မည်မျှအလွယ်တကူ ဦး ဆောင်နိုင်မည်ကိုငါရှုပ်ထွေးနေသည်။ ဘာသာစကားသည်စာလုံးပေါင်းခြင်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သဖြင့်ဤဝေါဟာရနှစ်ခုသည်သင်မြင်ရသည့်အတိုင်းထင်မြင်ယူဆနိုင်သောအရာထက်ပိုသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးရှိသော်ငြားလူမှုရေးအရနီးကပ်သောဆောင်ပုဒ်သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ lockdown ဆိုတာငါတို့ဝိညာဉ်ဒါမှမဟုတ် totipotent ပင်စည်ဆဲလ်ကိုသင်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလကိုဆိုလိုတယ်။
Bill Wesick မှ occultcience101၊ YT တွင်မဟုတ်ဘဲ playlists များနှင့်ယခု theocs101ark.com တွင်အစစ်အမှန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသော Saturnal Luciferian coding language ကိုရှာဖွေရာတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်သည်။ သငျသညျသဘောပေါက်သည်အထိသင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ၉၉% သောသိုးသည်မမြင်ရပါ
လူသားတွေဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါအစာအိမ်နာကျင်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့မူလအရင်းအမြစ်ကုဒ်နံပါတ်နဲ့ဆက်ပြီးအဆက်မပြတ်ဆက်နေဖို့ကြိုးစားပါ။ ငါလုပ်စရာအများကြီးမရှိဘူး ...
« ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်သတင်းအတုအတုဖြစ်သည်။
Trump, Q-Anon နှင့် 'deepstate clean up' ဒဏ္myာရီ (Robert Jensen, Janet Ossebaard) »
လုဒိ Roosje op မီတာတစ်ဝက်ခွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သော Mark Rutte နှင့် Hugo de Jonge တို့၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
သုံးသပ်ကြည့်ရှု op သင့်ပတ်လည်ရှိလူများသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်မမြင်ဖြစ်ရသနည်း။
ZalmInBlik op သင့်ပတ်လည်ရှိလူများသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်မမြင်ဖြစ်ရသနည်း။
မာတင် Vrijland op မီတာတစ်ဝက်ခွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သော Mark Rutte နှင့် Hugo de Jonge တို့၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
မာတင် Vrijland op သင့်ပတ်လည်ရှိလူများသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်မမြင်ဖြစ်ရသနည်း။